साईत त जुर्यो, लजाउने शिल्पा की आर्यन ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
साईत त जुर्यो, लजाउने शिल्पा की आर्यन ?
Published On : October 21, 2013
बैकुण्ठ पराजुली, काठमाण्डौ। छविराज प्रोडक्सनको दोस्रो प्रस्तुती स्वरूप निर्माण हुन् लागेको नेपाली चलचित्र ‘लज्जा’को सोमबार सुभ साइत गरिएको छ । राजधानीको कमलादी स्थित गणेशस्थान मन्दिरमा यो चलचित्रको शुभ साइत गरिएको हो ।
छवि ओझा निर्माता रहने यो चलचित्रलाई निर्देशक नवल नेपालले निर्देशन गर्ने छन् । ‘लज्जा’को औपचारिक छायांकन भने तिहार पछि मात्र सुरु गरिने निर्माण युनिटले जानकारी दिएको छ । यो चलचित्रमा आर्यन सिग्देल र शिल्पा पोखरेल मुख्य भुमिकामा देखिने छन् । मोडल शिल्पा लज्जाबाट पहिलो पटक नेपाली रजतपटमा नायिकाको रुपमा डेव्यु गर्दैछिन् । नायक आर्यन आफ्नै चलचित्र नोभेम्वर रेनमा व्यस्त भएपछि लज्जाको छायांकन दशैंबाट तिहार पछि सरेको बताईएको छ ।
प्रेमकथामा आधारित रही निर्माण गर्न लागिएको यो चलचित्रको कथा निर्माता छबि ओझाले नै लेखेका हुन् । चलचित्र ‘लज्जा’मा संगीत चेतन सापकोटाको रहने छ भने द्वन्द चन्द्र पन्तको रहने छ त्यस्तै चलचित्रलाई मदन कास्यप घिमिरेले खिच्ने छन् । पछिल्लो समय दर्शकले निकै रुचाएको चलचित्र ‘काली’ बाट खुसि बनेका निर्माता छविले यो चलचित्रलाई भने आगामी नयाँ बर्षमा प्रदर्शनमा ल्याउने सोच बनेको बताएका छन् ।
स्मरण रहोस आगामी मङ्सिर २१ गते छबि ओझाकै चलचित्र ‘लोफर’ प्रदर्शनमा आउदै छ ।